Vovonana GV tao Delhi: ny fiteny sy ny fandikan-teny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2018 2:23 GMT
Nikarakara fivoriana miavaka momba ny fandikan-teny nandritra ny valandresaka Global Voices i David Sasaki. Manomboka amin'ny resadresaka notarihan'i John “Feng 37″ Kennedy amin'ny teny Shinoa teo amin'ireo mpiteny Shinoa enina tao amin'ny efitrano izany, avy eo resaka teo amin'ny olona dimy amin'ny teny Swahili, notarihan'i Ndesanjo Macha, avy eo resadresaka mivantana amin'ny teny Hindi mahakasika ny ampahefatry ny efitrano. Nandinika i David fa nandritra ny resadresaka tsirairay, nahita olona enina mitsiky izy, mandray anjara amin'ny resaka, ary ny hafa rehetra tsy miraharaha ny resadresaka amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy fa fanoharana mahasoa ho an'ny fanamby sasany atrehantsika ao amin'ny Global Voices izany- ahoana no ahafahantsika manatsara, manaparitaka ary mandika ny resadresaka amin'ny fiteny rehetra hita anaty aterineto?
Portnoy Zheng koa mitarika tetikasa fandikàna lahatsoratra avy amin'ny Global Voices ho amin'ny teny Shinoa. Ny antony nanombohany ny tetikasa dia ny fahatsapana fa sarotra be ny mahazo vaovao iraisam-pirenena azo antoka ao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra Taiwaney. Nanomboka nandika tantara iray avy any Indonezia tao amin'ny Global Voices izy, niresaka momba ny fianjerana fiaramanidina nateraky ny lanjana “durian” tafahoatra tao anatiny izay namoizana mpanao politika Indoneziana maromaro (ny Durian dia voankazo mahatsikaiky, izay mety manazava ny antony nahatonga an'i Portnoy ho nahatsiaro voatery nanome dikan-teny pan-Aziatika). Rehefa avy nandika lahatsoratra teo amin'ny 100, dia nihaona tamin'i Rebecca tany Taiwan izy ary nanapa-kevitra ny hampiditra ofisialy ny tetikasa. Misy tranonkala iray ankehitriny- tazonin'ny mpandika teny 10 eo ho eo – izay mandika ampahany amin'ny lahatsoratra ao amin'ny Global Voices. Tsy misy torolalana mazava mikasika izay tafiditra – matetika lahatsoratra miresaka momba an'i Shina na avaratr'i Azia, ary matetika lahatsoratra momba ny adihevitra any Afovoany Atsinanana, izay eritreretin'i Portnoy fa tsy voatantara firy ao amin'ny fampahalalam-baovao Shinoa.
Nilaza i David fa mandika ampahany kely ihany amin'ny fiteny sasantsasany ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ny Global Voices – mandika votoaty avy amin'ny teny Espaniola, Portiogey, Swahili, Frantsay, Arabo, Persiana, Mandarin, Rosiana ary Serba sy Okrainiana izahay. Any amin'ny firenena hafa, tsy voasolo tena tsara ny adihevitra eo an-toerana, fa mampiseho olona vitsivitsy ihany ao amin'ny firenena izay mahay fiteny roa. Nilaza momba ny lahatsoratra bilaogy vao haingana mitondra ny lohateny hoe “Afrika, Global Voices sy ny fitiavan-tena” izy, izay milaza fa raha tsy miteny anglisy ianao dia tsy miseho ao amin'ny global voices. Nitady fomba hanovana izany tsikera izany ho fandraisana anjara i David – inona no mety ho fandraisana anjara amin'ny fanomezana ny mpanoratra ity lahatsoratra ity hanampy handika ny GV amin'ny teny Espaniola sy handika ny lahatsoratra amin'ny teny Espaniola ho ao amin'ny GV [teny anglisy]?
Nanomboka nanipika ny sasany amin'ireo fanontaniana atrehintsika amin'ny fitantanana ny dikanteny ao amin'ny GV i David:
– Ahoana no andrisihantsika ny fandikan-tenin'ny bilaogera? Ahoana no ahafahantsika mahazo olona maro kokoa hanao izany?
– Mila alalana avy amin'ny bilaogera ve isika alohan'ny hanombohantsika handika teny ny sangan'asan'izy ireo?
– Tokony handika teny ireo fanehoan-kevitra tsy amin'ny teny Anglisy ve isika mba handrisihana resadresaka?
– Tokony hamela ny olona handika ny lahatsoratra rehetra ve isika, amin'ny fampiasana ny modely Indymedia izay ahafahan'ny olona misafidy tabilao, mifidy fiteny ary manome ny fandikan-teniny manokana?
Ity fanontaniana farany ity dia niteraka lohahevitra hoe “Maninona no tsy hapetraka ao amin'ny MediaWiki izay rehefa hita ao amin'ny tranonkala, mba ahafahan'ny olona mandika teny na aiza na aiza?” Ny valiny tsotra: tokony ho izany – tsy nanana fotoana ampy hieritreretana ny fomba hanaovana ny tranonkala ho azo adika isika. Nilaza ny iray tamin'ireo tonian-dahatsoratry ny fikambanana fa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra tsara momba izay adikantsika isika- safidy amin'ny lohahevitra toy ny tantara nofidiantsika ho an'ny tranonkala izany.
Soso-kevitra roa izay nahazo tehaka mirefotra sy fientanam-po:
– mitady fomba hanomezana valisoa ho an'ireo mpandika teny an-tsitrapo, angamba amin'ny dolara Amazon Rewards na vola hafa
– mamela ny olona hanome ny vaki-tenin'izy ireo amin'ny lahatsoratra GV amin'ny fandikàna avy amin'ny rohy ao amin'ny tranonkala.